Iyo yakagadzikana vhezheni yeOpera 54 webhu browser ikozvino yave kuwanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Iyo yakagadzikana vhezheni yeOpera 54 webhu browser ikozvino yave kuwanikwa
Munguva pfupi yapfuura timu inoona nezvekuvandudzwa kweiyo Opera webhu bhurawuza yazivisa kuwanikwa kweshanduro yakagadzikana yeshanduro 54 yeichi browser. Huye, mushure memavhiki akati wandei ekuyedzwa nekusimudzira zvine chekuita nebeta vhezheni yebrowser iyi, isu pakupedzisira tichava neyakagadzikana vhezheni yebrowser.
Kune avo vasati vaziva ichi chikuru browser ndinogona kukuudza izvozvo, Opera ibhurawuza rewebhu, inova proprietary software, asi yakavhurwa sosi, Yakagadzirwa nekambani yeNorway Opera Software muna 1995, Opera yakaiswa pakati peimwe yemawebhusaiti anonyanya kushandiswa. Opera parizvino ine zvinyorwa zve desktop, mapiritsi uye nhare mbozha.
Opera ndeye muchinjika-chikuva webhu browser iyo inogona kushandiswa mumasisitimu anonyanya kufarirwa, iyo Linux vhezheni inouya neese akafanana maficha seOpera yeWindows uye Mac, inosanganisira Speed ​​Dial, Tsvaga basa, Opera Turbo, Favorites (dzinodikanwa) uye vagovana zvido, madingindira, zvinowedzerwa nezvimwe zvakawanda.
Iyo Opera Bhurawuza inopawo simba rekuchengetedza mamiriro, Inopa kusvika ku50% hupenyu hwakareba hwebhatiri uye inodzivirira kupisa.
Sezvambotaurwa, mavhiki akati wandei apfuura mushure mekuburitswa kwe beta iyi vhezheni, iyo yakabwinyiswa kuti uwane iyi nyowani yakagadzikana vhezheni yebrowser.
Shanduro itsva ye Opera 54 ine maficha nyowani uye akasiyana gadziriso. Pakati peizvi zvese, izvo zvatinogona kuratidza zveiyi vhezheni itsva tinogona kuwana zvinotevera zvinhu.
1 Chii chitsva muOpera 54
2 Kubatanidzwa kwemageneral sensors
3 Dhawunirodha Opera
Chii chitsva muOpera 54
Zvino zvaita kugadzirisa iyo Opera base kuChromium 67, zvakare iyi vhezheni vhezheni anosvika neNhau paSpeed ​​Dial, chinongedzo chinoburitsa misoro yenyaya dzichangoburwa dzenyika nemitauro yaunosarudza, zvakananga papeji rekumba rebrowser yako.
Se inogona kusarudza akawanda mapoka kusefa zvemukati iwe unoda kuona mu Speed ​​Dial.
Zvikamu zvinosanganisira hunyanzvi, bhizinesi, varaidzo, chikafu, hutano, mararamiro, hupenyu, motorsports, nhau, sainzi, mitambo, tekinoroji uye kufamba.
Nyika dzinopfuura makumi mana nemitauro yemitauro zviripo, uye ivo vanogona zvakare kusarudza anopfuura imwe kuti vagamuchire dzakasiyana siyana yezvinyorwa zvemukati.
Kusarudzwa kwezvikamu, nyika nemitauro zvinogona kuitwa mubhawa remenu yepamusoro, pamusoro pezvinyorwa zvemashoko, mu Speed ​​Dial.
Kuti uwane imwe yakasarudzika nhau feed, enda kune "Yemunhu Nhau" peji, inowanikwa kubva padivi repaseri reiyo Opera peji rekumba.
Uyewo, peji nyowani yemenyu yakawedzerwa, inonzi "Gadziriso uye Kudzoreredza", kubatsira kurerutsa bhurawuza kugadzirisa uye kugadzirisa maitiro.
Kuti tiende kune ino peji, isu tinongofanirwa kuenda kubrowser menyu iyo iri kumusoro kwechikamu chekuruboshwe (iyo opera icon).
Iye zvino pano tinogona kuona yazvino vhezheni nhamba yebrowser yako muKugadziridza.
Tinofanira tinya pane bhatani re "Tarisa zvidzoreso" mune ino menyu, izvi zvinoita kuti Opera itsvage vhezheni itsva yebrowser. Kana vhezheni nyowani ichiwanika, bhatani rekuvandudza richaonekwa.
Kubatanidzwa kwemageneral sensors
Uyewo tinogona kuwana mune ino nyowani nyowani yebrowser kusanganisa kwemageneral sensors iyo inotaurirana kuburikidza neakajairwa API.
Iyo Generic Sensors API inopa hwaro hwema sensors muchimiro cheSensor-base interface uye inosanganisirwa isingabvumirwe mashandiro. Aya anotevera mamwe emasaenzi anoshanda neiyi yakaitwa API:
Accelerometer- Maseru anoyera (akakodzera) kumhanyisa (mwero wekumhanya shanduko).
Gyroscope- Iyo sensor inoyera kutenderera kana angular velocity.
Mamiriro ekudzidzira sensor- Imwe sensor inokanganisa ma sensors maviri ari pamusoro apa kuti ipe yakaringana mamiriro ekutenderera.
Motion sensors: Iyi sensor inosanganisira magnetometer, pamwe neiyo accelerometer uye gyroscope.
Kana iwe uchida kutora iyi nyowani vhezheni yeOpera iwe unofanirwa kuenda kune yepamutemo webhusaiti yeiyo browser kwaunogona kuitora iyo yekumisikidza faira yacho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo yakagadzikana vhezheni yeOpera 54 webhu browser ikozvino yave kuwanikwa
Maitiro ekuwana iyo nyowani macOS Mojave desktop muGnome
Dzimwe nzira dzakanakisa dzekutsiva Yaourt muArch Linux